Baro - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Aagga Robbinsdale (Dugsiga Madaxa-bannaan ee Degmada 281) waa degmo ku guuleysatay abaalmarin u heellan heer sare ee tacliineed Waxaan ku faaneynaa doorashada aan siinay qoysaskeena iyo ardayda muddo ku dhow qarni. Waxaan u adeegnaa dhammaan ama qaybo ka mid ah toddobo beel oo leh in ka badan 100,000 oo deggan xaafadaha waqooyi-galbeed ee Minneapolis, Minn.
Dugsiga Sare ee Armstrong ayaa kaalinta 6-aad ka galay qaybta Minnesota ee liiska "Dugsiyada Sare ee Ugu Dhibka Badan", oo hore u daabacday Washington Post, 2018 iyo Cooper ayaa liiskan ka dhigtay lambarka 25. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno aqoonsi heer sare ah labadan iskuul. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta qiimaha halkan .
Waxaa naga go'an inaan ka qalin jabino ardayda jaamacadda, xirfadaha xirfadaha leh, iyo shaqooyinka diyaar u ah.
Dugsiga Sare ee Robbinsdale Armstrong wuxuu hoy u yahay barnaamijka meelaynta horumarsan , Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa loogu magac daray Liiska Kasbashada Qaranka ee AP si loo kordhiyo boqolkiiba ardayda qaadata imtixaanada AP iyo kordhinta tirada dhibcaha sare ee imtixaanadaas.
Dugsiga Sare ee Robbinsdale Cooper High School waa mid ka mid ah toban dugsi sare oo ku yaal Minnesota oo bixiya barnaamijka IB ee caqabada ku ah, degmadeena waxaa si buuxda loogu fasaxay barnaamijka International Baccalaureate (IB) , oo ah barnaamij tacliin leh oo loogu tala galay K-12 kaas oo la aqoonsan yahay laguna dhaqmo adduunka oo dhan. Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale wuxuu bixiyay barnaamijkii ugu horreeyay ee loo oggolaaday IB Middle Years Program ee gobolka; in ka badan 600 oo arday ayaa ka diiwaangashan degmada oo dhan. Labada dugsiba waxay la jaanqaadeen Dugsiga Hoose ee Lakeview, oo ah barnaamij si buuxda loo oggol yahay sannadaha Dugsiga Hoose (PYP) ee International Baccalaureate continuum.
Dugsiyadeenna sare waxay bixiyaan in ka badan 180 koorso, oo ay ku jiraan Barnaamijka Meelaynta Horukacsan (AP) iyo Barnaamijka Caalamiga ah ee Baccalaureate (IB) , Marka lagu daro heshiisyada amaahda ee qeexan ee xirfadaha xirfadda leh. Dhammaan dugsiyadeenna, waxay bixiyaan barnaamijyo loogu talagalay waxbarashada gaarka ah iyo ardayda hibada leh iyo kuwa hibada leh ee heerarka fasallada oo dhan.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay kaloo fidiyaan barnaamijyo Horumar Via Individual Determination (AVID) oo ka socda labada dugsiyadeena dhexe iyo labada dugsiyadeena sare. Barnaamijkani wuxuu dardargeliyaa barashada ardayda, wuxuu adeegsadaa habab cilmi baaris ku saleysan oo wax ku ool ah wax looga barto, wuxuu sare u qaadaa rajooyinka laga qabo ardayda, wuxuuna dejiyaa nidaam taageera oo ka caawiya ardayda inay guuleystaan.
Iska daa xiisaha aad u qabto farshaxanka wanaagsan
Si isdaba-joog ah ayaa loo aqoonsaday mid ka mid ah Bulshooyinka ugu Fiican Waxbarashada Muusikada, waxaan ku faraxsanahay sumcaddayada barnaamijyada abaalmarinta ku guuleystay ee riwaayadaha, muusikada iyo farshaxanka wanaagsan. In kabadan 5,000 oo ardaydeena ah ayaa kaqeybqaata kooxda heesta, kooxda muusikada iyo muusikada. Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay horumariyeen waxbarashadda farshaxanka ee edbinta ku dhisan oo hadda loo isticmaalo heer qaran. Ardayda muusikada ee degmadu waxay sanad walba ku qabtaan bandhig faneedka Orchestra Hall ee magaalada Minneapolis iyo meelo caan ah oo adduunka ah. Waxaan nahay degmadii ugu horreysay ee dugsiyadda ee aan ka helno Abaalmarinta 'Medallion Award' hay'adda Tiyaatarka Carruurta ee tabarucaadka gaarka ah ee tiyaatarka K-12.
Ciyaaraha fudud iyo waxqabadyada manhajka ka baxsan ayaa sidoo kale qayb muhiim ah ka ah nolosha ardayda ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Degmadeena waxay siisaa xulasho isboorti oo dhameystiran gabdhaha iyo wiilasha. Intaas waxaa sii dheer, ardayda waxay kaqeyb qaadan karaan in kabadan 30 nashaadaadyada manhajka ka baxsan iyo fursadaha kobcinta tacliinta.
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay bixiyaan barnaamij waxbarasho oo dhammaystiran oo bulshada ah oo u adeegta deggeneyaasha dhalashada illaa hawlgabka oo ay ku jiraan xarunta qoyska ee carruurnimada hore, xarunta kheyraadka qoyska, adeegyada waayeelka, barnaamijyada tacliinta ee dadka waaweyn iyo fasalo lagu kobcinayo. Hadday tahay fasallada waalidnimada, barnaamijyada kobcinta, fasallada Ingiriisiga ee loogu talagalay soogalootiga cusub ama koorsooyinka GED, kumanaan kun oo deggeneyaasha ah ayaa ku hawlan barashada nolosha oo dhan Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Aragtidayada Midaysan ee Degmada waxay nagu qasbeysaa inaan siino heer sare tacliinta ardayda oo dhan! Kaalay oo arag farqiga u dhexeeya Dugsiyada Aagga Robbinsdale.